Bursa T2 ရထားဘူတာ၊ မြေပုံနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဗွီဒီယို - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaBursa T2 ဓါတ်ရထားလိုင်းစခန်းများ, မြေပုံနှင့်ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယို
07 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Maps, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
bursa te လမ်းရထားလိုင်းကိုမြေပုံနှင့်ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယိုကိုရပ်တန့်
Bursa T2 အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကိုအပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆက်လက်။ ဤတွင် Bursa T2 လမ်းရထားလိုင်းကိုရပ် ...
terminal ကိုလမ်းရထားလိုင်းကိုအပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အပြည့်အဝလွှဲများတွင်ဆက်လက် - T2 Bursa မြို့ရင်ပြင်အတွင်းအကောင်အထည်ဖော်။ အစ္စတန်ဘူလ်လမ်းဖြတ်သန်းသောလိုင်းတလျှောက်ကလမ်းပေါ်မှာ၏ဗေဒအသွင်အပြင်များကိုဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဤအခြေအနေတွင်မှာစစ်တမ်းဟာမြေပေါ်၏နိုင်ငံသားများ၏ဒီဇိုင်းကိုလမ်းပေါ်မှာပေါ်တွင်တည်ဆောက်လိမ့်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အစပျိုးခဲ့သည်။ 23 စုစုပေါင်းဘူတာရုံစီမံကိန်းကိုသာသူတို့ကို9လျှောက်ထားခံရဖို့သူတို့ကိုပြင်ဆင်နေနေစဉ်။
တထောင်မီတာရှည်လျား 112နှင့်အတူ Bursa T9 လမ်းရထားလိုင်းကိုပါဝင်သည်ဟု 445 ဘူတာရုံ။ ယင်းသိုလှောင်ရုံဧရိယာ၌စီမံကိန်းအတွက်ဘူတာ, နှင့်32 ခွဲရုံမှတစ်ပါး61 ရထားလမ်းတံတားနှင့်လမ်းတံတား, ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်။
ပင် tramcars2xnumx'şerl sequence ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စတင်တဲ့အခါအချိန်က Bursa T12 လိုင်း။ ခဏ T ကအဆိုပါလမ်းရထားဝန်ဆောင်မှု၏အမြန်နှုန်း! လိုင်းပိုမြန်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Bursa T2 ဓါတ်ရထားလိုင်းစခန်းများ
- Turk Telekom ခြောက်လGençosman
- ထိုလမ်းဆုံနောက်ကွယ်မှBeşyol 300 မီတာ
- လမ်းဆုံBeşyolကျော်လွန် 300 မီတာ
- မျှတသော Interchange
- အထောက်အထား Store မှာတပ်ဦး
- အလယ်ပိုင်းရှေ့ AS
- ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်မျက်နှာစာ
ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယို 09 / 07 / 2014 ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယို: ဝန်ကြီးချုပ် '' s 'ကို Marmaray' 'တစ်ဦးချင်းငါ့ညီ, ချေါ' နှင့်Kazlıçeşmeစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်သိသိသာသာGöztepeအကြားခရီးသွားအချိန်ကိုအတိုကောက်တံ့သောအတူ။ ဥရောပဘေးထွက်: ရှိပြီးသားချွတ်၏ 5.4 ကီလိုမီတာအပေါ် Seraglio 's ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကနေဒီလမ်းကနေKazlıçeşmeကျွန်တော်တို့ရဲ့မသန်စွမ်းနိုင်ငံသားများမှသင့်လျော်သောမြေပေါ်လက်လှမ်း၏လမ်းလမ်းဆုံအစီအစဉ်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏ xnumxxxnumx ချွတ်ဖယ်ရှားရေးတိုးချဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေလက်ကြား Crossing: တစ်ဦးချင်းစီကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတစ်ကော်လာ၏ဗဟိုစီးပွားရေးအဆောက်အဦနှင့်အတူဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးနှင့်သေဆုံးသူ Plaza ဖြစ်စေအပေါ်လေဝင်လေထွက်မီးခိုးခေါင်းတိုင်, ...
Karabükတက္ကသိုလ်ရထားစနစ်များအင်ဂျင်နီယာတင်ပြဗီဒီယို 25 / 07 / 2012 ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူလေ့ကျင့်သင်ကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရထားလမ်းစနစ်များနှင့်နည်းပညာများအကြောင်းကိုအလုံအလောက်မီးရထားစနစ်အင်ဂျင်နီယာများ၏ဦးစီးဌာနတူရကီ၏ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက်, သင်္ချာ, သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုအောင်မြင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ကျောင်းသားများကိုပြင်ဆင်ထားရန်, ဒီဧရိယာ၌ပြဿနာများ applications များပေးခြင်းအားဖြင့်။ ရထားလမ်းစနစ်များအင်ဂျင်နီယာရေးဆွဲရာတွင်, ပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်, မော်ဒယ်, ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်ရရှိရလဒ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အနက်ကိုဘော်ပြမှလိုအပ်သောစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူကျွမ်းကျင်မှုဖြေရှင်းရေး။ ဗွီဒီယိုအရင်းအမြစ်အတွက်ကလစ်နှိပ်ပါ: အဆိုပါ muh.karabuk.edu.t
ရထားလမ်းကလပ်ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယို 15 / 03 / 2013 ရထားလမ်းကလပ်နိဒါန်းဗီဒီယို Yildiz နည်းပညာတက္ကသိုလ် (YT), အရထားလမ်းစနစ်၏အသွားအလာပြဿနာများ၏ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်ဖွင့်လှစ်မှာတူရကီ "ရထားလမ်းကလပ်" မှာတစ်ဦးပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်, တူရကီအရေးတကြီးဒီစနစ်ပေါင်းစည်းသင့်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ http://youtu.be/dyxnumxkkchxnumxxxnumx
ဤတွင်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းတင်ပြဗီဒီယို (ဗီဒီယို) 09 / 07 / 2014 ဤတွင်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယို: စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်သိသိသာသာGöztepeအကြားခရီးသွားအချိန်ကိုအတိုကောက်တံ့သောအတူဝန်ကြီးချုပ် '' s 'ကို Marmaray' 'တစ်ဦးချင်းငါ့ညီ, ချေါ' နှင့်Kazlıçeşme။ ဥရောပဘေးထွက်: ရှိပြီးသားချွတ်၏ 5.4 ကီလိုမီတာအပေါ် Seraglio 's ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကနေဒီလမ်းကနေKazlıçeşmeကျွန်တော်တို့ရဲ့မသန်စွမ်းနိုင်ငံသားများမှသင့်လျော်သောမြေပေါ်လက်လှမ်း၏လမ်းလမ်းဆုံအစီအစဉ်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏ xnumxxxnumx ချွတ်ဖယ်ရှားရေးတိုးချဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေလက်ကြား Crossing: တစ်ကော်လာ၏ဗဟိုစီးပွားရေးအဆောက်အဦနှင့်အတူဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးနှင့်သေဆုံးသူ Plaza ဖြစ်စေအပေါ်လေဝင်လေထွက်မီးခိုးခေါင်းတိုင်, အသီးအသီး ...
Akçarayအတွက်ရပ်တန့်ပွားဗီဒီယိုထိမိ 07 / 02 / 2018 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်,4ဖေဖော်ဝါရီလကမ္ဘာ့ကင်ဆာနေ့ဖြစ်စေသိသိသာသာအသိအမြင်နှင့်အတူမြို့၏ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များမှာဒီဂျစ်တယ် display ကိုမှာပြထားတဲ့အလုပ်သွင်းယူပေးခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် screen ပေါ်မှာသာမန်ကြော်ငြာရုပ်ရှင်ပုံရိပ်တွေနဲ့တူပထမတစ်ချက်မှာစတင်ခြင်း, သူနိုင်ငံသားများ, ထို့နောက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်အဝအချိန်လေးနေထိုင်ခဲ့သိရသည်။ ပြသ DIGITAL SCREEN ကိုတားဆီးနိုင်ကင်ဆာဆန့်ကျင်အများပြည်သူအသိအမြင်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအသိအမြင်လှုပ်ရှားမှုများသည်သူ၏အသက်တာ၏အများဆုံးသုံးစွဲ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှုအအသိအမြင်တိုတောင်းသောရုပ်ရှင်၏ပုံစံထုတ်ယူသွားလမ်းရထားနိုင်ငံသားတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရှိရရာဖို့အတွက် walkway ကိုရှေးခယျြခဲ့ကြတော့ဘူး။ လေ၌ရှိဝှေ့ယမ်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖော်ပြပေးသောဒစ်ဂျစ်တယ် display ကိုမှာပြထားတဲ့ဆံပင်ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင် ...
Bursa T1 အဆိုပါလမ်းရထားမော်တော်ကားလေလံ | Piece အနိမ့်အထပ်လမ်းရထားမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူမှု Tram လိုင်းများအတွက် BURSA T16နုစျေးနှုန်း (အထူးအစီရင်ခံစာ) အတွက်လေလံဖွင့်လှစ်